Kuchengetedza Software uye Vatengi kubva kune Vanokanganisa? | Martech Zone
Chitatu, October 4, 2006 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Zvichida zvimwe zvekutenderera kwakashata kwandati ndamboverenga paSoftware Piracy!
Verenga Chinyorwa: Microsoft Dziviriro Software. Izvi zvakashata sePatriot Mutemo! (AKA: Tinofanirwa kuchengetedza rusununguko rwako, uye uchave uri munhu anofarira nyika kana ukasiya imwe yerusununguko rwako kuti tikwanise kuchengetedza rusununguko rwako…. Huh?). Microsoft ingadai yakangoita iyi memo yemukati:
Microsoft Profit Kudzivirirwa Platform: Kuchengeta Software Inodhura uye purofiti kuburikidza nedenga!
Ini ndinotenda zvakasimba kuti vanhu vazhinji vanozongobira kana vachifanira. Chokwadi, kune vanhu vazhinji vanozoba nekuda kwayo - asi handifunge kuti yakawanda. Ini ndinofunga ndiri kutaura kuvanhu vazhinji kana ndikati izvo Microsoft Software IS zvinodhura. Zvakare, ini handina kana tariro yekutarisira nokusingaperi kuwana rutsigiro. Uye - ndinoziva kuti ndinofanira kuvimba nezvinovandudzwa kuti software ishande. Uye - ndinoziva kuti ndinofanira kutenga nekuisa imwe software kuti ndichengetedze software yangu yeMicrosoft kubva pakurwiswa zvakaipa.
Izwi rekuti `` rekunyepedzera '' harisi iro izwi rechokwadi. Iyo software haisi yekunyepedzera… mabhokisi nemaCD anogona kunge ari… asi software yacho ndiyo chaiyo Microsoft software. Kurwira zvisiri pamutemo kuteedzera uye kuisa software inoita NOT chengetedza software kana kudzivirira vatengi. Vatengi vanoda chigadzirwa chako vanogara vakagadzirira kubhadhara icho chigadzirwa. (Ini ndakabhadhara XP uye Hofisi XP)
Izvo zvinoshamisa kusaziva uye gutsy kutenderera kweMicrosoft kuburitsa chinyorwa chisina basa zvakadaro. Pane chero munhu anotenda kuti iri ishoko rechokwadi? Iri ndiro dambudziko neMarketing nhasi, vanhu havazvitende nekuti hazvitendeseke.
Ajax, DOM, RSS, XHTML, SOAP… zvese izvo zvinhu! Zviri nyore kupfuura iwe zvaunofunga!
Gumiguru 4, 2006 na12: 22 PM
"Ndinotenda zvakasimba kuti vanhu vazhinji vanozongobira pavanenge vachifanira kudaro."
Ini sooooo ndinoda kukutenda. Ini zvakanyanya kuda kutenda kuti marofu echingwa anobaiwa chete anoenda kunofudza mhuri ine nzara yembavha. Ini ndinoda kwazvo kuti zvive zvechokwadi…
Asi, muzuva rino uye zera ndinotenda kuti software, yechero software, inoonekwa kuburikidza neinopfungaira-girazi zviono zvemakore ekutanga eMicrosoft Windows 3.chimwe chinhu… HAPANA kuti kutevedzera kwaive chokwadi (!!!) asi kuti Microsoft haina 't "zvinoita sekufunga" kutevedzera. (Izvo zvisiri zvechokwadi asi ndiwo maonero.)
Ini handitende kuti Joe Avhareji anokwanisa kusiyanisa zvakajeka pakati pebasa rakaoma revasarudzo mapurogiramu, kuyedza kutsvaga raramo, uye mega-bhizinesi-monoliths vari kungoedza kutsvaga mutengo wakaringana wechigadzirwa chavo. Saka nekudaro hapana kunetsekana pachikamu chaJoe icho software yaanoshandisa iye mune chero zvinombobvumidzwa zviri pamutemo kana zvisiri pamutemo fashoni.
Iyi inyaya yekuona uye isina kukanganisa pane izvozvo. Tinofanira kubhadhara purogiramu yega yega yatinoshandisa. Ini handitendi chete kuti Joe Avhareji anochengetedza iwo maonero akafanana.
ndine hurombo… yangu chete $ 0.02
Gumiguru 4, 2006 na1: 38 PM
Hapana ruregerero runodiwa, William! Ini ndinofunga tave pedyo nechibvumirano kupfuura iwe zvaunogona kufunga.
Ini ndinofunga gakava iri rakakodzera kukurukurwa. Kubiridzira kunobatsira kambani software nekuparadzira software nemazvo? Ndine chokwadi chekuti inoitira vamwe.
Zvichida ini handina njere mukufunga kuti vanhu vaizobhadhara nekuti ini ndinobhadhara software. Ini ndinofanira kubvuma kuti ini ndashandisa pirated software uye ndokuzoibhadharira gare gare futi. Dzimwe nguva kutongwa kunogumira uye ini ndanga ndisiri kunyatso chokwadi kana yaive yakakodzera mari yacho.
Mumoyo mangu memwoyo ndinotenda izvo zvinopa uye zvinoda kudzora mitengo. Nekudzivirira uye kudzora izvo nemabatiro anomanikidza munhu kutenga, ndinofunga urikukumbira kuti vanhu vabe pane kudaro.
Mari yakawanda zvakadii? $ 400? $ 100? $ 10 / mo? Nei ichikosha mari yakawanda pakombuta nyowani (OEM) pane kukwirisa komputa? Ini ndinofunga chimiro chemutengo chakakanganisika, uye Microsoft inokonzeresa kushandisa LOT yemari paPiracy pane kungoita yavo software ive inodhura.
Gumiguru 5, 2006 na8: 56 PM
Ini ndaive netariro yekuti vamwe vangadai vabatana nekusagadzikana pano… asi maiwe ... ndakagadzirira mhinduro yehurefu uye ndakatumira zvakafanana ku Mukupindura Doug Karr…